တောက်ပကြည်လင်တဲ့အသားအရေရရှိစေဖို့ ~ ကိုထွေး(နည်းပညာ)
စာဖတ်သူများနဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် တောက်ပ လန်းဆန်းတဲ့ အသားအရေ ကို ဘယ်လို ဖန်တီးကြမလဲ ဆိုတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး စုဆောင်းထားသမျှ လေးတွေကို အကြံပြု ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်…ညိုးနွမ်းခြောက်သွေ့နေတဲ့ အသားအရေနဲ့ဆို လူတွေကြား သွာလာတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ် နည်းစေပါတယ်.. ဒီတော့ စိုပြေ လတ်ဆတ်တဲ့ အသားရေ ရရှိဖို့ အောက်က အချက်လေးတွေကို ကြိုးစားပြီး လုပ်ကြည့်ကြစေလိုပါတယ်…
၁. နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ရန် ကြိုးစားပါ… တစ်နေ့လျှင် နာရီဝက်ခန့် လုပ်နိုင်လျှင် ကောင်းပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းမှ ချွေးများကို ထွက်လာစေဖြင့် အရေပြားကို သန့်ရှင်းကြည်လင်စေပါသည်။
၂. ရေများများသောက်ပါ။ တစ်နေ့ကို ရေ ဂခွက်မှာ ၁၀ခွက် သောက်သင့်ပါသည်။ ရေသည် ကိုယ်ခန္ဓာ အတွင်းရှိ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှား ပေးပြီး အသားအရေကို တောက်ပ လန်းဆန်း စေနိုင်ပါသည်။ ရေ တစ်ဖန်ခွက် အပြည့်ကို သောက်ရခက်လျှင် ရေခွက်ထဲသို့ သံပုရာသီး တစ်စိတ် ညှစ်ထည့်ခြင်းအားဖြင့် သောက်ရ လွယ်ကူစေ နိုင်ပါသည်။
၃.သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အသီးအနှံကို များများစားပေးပါ။ ပန်းသီး၊လိမ္မော်သီး၊ တို့ကိုနေ့စဉ် စားပါ။ မုံလာဥနီဖျော်ရည်နှင့် ပဲနို့ သည် အသားအရေကို စိုပြေလှပစေဖို့ လွန်စာအထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
၇. အဆီများသောငါးနှင့် ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ တူနာငါး၊ဆာဒင်းငါး စသည်တို့ကို များများ စားပါ…
၈. အသီးအရွက်များများစားပါ။ နေ့စဉ် အရွက်သုပ် တစ်မျိုးမျိုးကို မပါမဖြစ် စားသုံးပေးပါ။
၁၀. ငှက်ပျောသီး၊ သဘောင်္သီး၊ ထောပတ်သီး တစ်မျိုးမျိုးကို နွားနို့နှင့်ရောနယ်ကာ မျက်နှာပြင်ပေါ် လိမ်းခြယ်ပါ။ ၁၀မိနစ်မှ ၁၅မိနစ် အထိထားပြီး ခြောက်သွေ့သွားလျှင်
ရေအေးနှင့် မျက်နှာကို ဆေးကြောပါ။ တစ်ပတ် ၂ကြိမ် ပုံမှန် ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် စိုပြေနူးညံ့ကာ တောက်ပသော မျက်နှာပြင် အလှကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ ရှားစောင်း လက်ပတ် အနှစ်ကို မျက်နှာပြင်ပေါ် နေ့စဉ် လိမ်းကျံပြီး ရေအေးနှင့် ဆေးကြောခြင်းကို လဲ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
၁၂. စိတ်ဖိစီးမှုများ၊စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချပါ။ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်များလွန်းလျှင်လည်း လျှင်မြန်စွာ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို အားပေး စေပါသည်။
၁၃. ဆောင်းရာသီတွင် ရာသီဥတု အေးလွန်းသဖြင့် အသားအရေ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါ သည်။ ၄င်းအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းမှာ မြန်မာပြည်တွင် အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူ ရရှိ နိုင်သော (Glycerine) အသားလှဆီရည်ကို ရေနှင့်ရော၍ နေ့စဉ်လိမ်းပေးပါက စိုပြေတောက်ပသော အသားအရေကို အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိစေနိုင်ပါသည်။